Hilibka cas oo laga qaado kansar | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — October 26, 2015
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay’adda caafimaadka adduunka WHO, ayaa lagu sheegay in cunista hilibka cas iyo kuwa la warshadeeyay ay kordhin karaan qatarta kansarka.
Waxaana qatarta ugu weyn leh kan la warshadeeyay, kaasi oo dabaqada shanaad kaga jira darajoojinka ay siiyaan ha’adaha arrimaha keena Kansarka.
Hilibka cas, xitaa hadii aan la karin, ayaa kaalinta labaad kaga jira kuwa ugu qatarta badan. Seynisyahanada, ayaa ku taliyay in cunista hilibka ay la qatar aheyn sida cabista sigaarka.
Qeybta baarista kansarka ee WHO, ayaa sheegtay in cunista 50 garaam oo hilib ah maalin kasta, ay kordhinayaan qatar ah in la qaado kansarka xiidmaha boqolkiiba 18.
Next post Yurub iyo Balkanska oo heshiis gaaray
Previous post Dowladda Iyo Akhlaaqda